एजेन्सी । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले इरानको आणविक कार्यक्रममाथिका चार प्रतिबन्धलाई थप ६० दिनका लागि नवीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय समयअनुसार सोमबार भएको निर्णयमा तेहरानलाई आणविक हतियार निर्माण गर्न सहज नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिबन्धलाई थप लम्बाइएको उल्लेख छ । विस्तृतमा
उत्तर कोरिया 'कोरोना फ्रि' भएको घोषणा
भारतमा समेत घरबेटीले डाक्टरलाई फ्ल्याटबाट निकाल्न थालेपछि...
इटालीमा यतिधेरै मानिसको मृत्यु हुनुको रहस्य यस्तो ?
अमेरिकामा कोरोना कारण ६ हप्ते शिशुको मृत्यु, कति पुग्यो मृतक र संक्रमितको संख्या ?
झण्डै पौने दुई लाख कुर्दिस सुरक्षाकर्मीले मतदान गर्ने
बग्दाद । उत्तरी इराकको अर्ध स्वायत्त कुर्दिस क्षेत्रमा भएको संसदीय निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ ।
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, ४८ जनाको मृत्यु
जाकार्ता । मध्य इन्डोनेसियामा पर्ने सुलावेसी प्रान्तमा शुक्रबार गएको शक्तिशाली भूकम्पहरु र त्यसपछिको सुनामीमा परी ४८ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
प्रबिधि चोरेको भन्ने अमेरिकी दावीको चीनद्वारा खण्डन
न्यूयोर्क, अमेरिका । प्रबिधि चोरेको भन्ने अमेरिकी दावीको चीनले खण्डन गरेको छ ।
प्रशान्त महासागरमा बिमान खस्यो
वेलिङ्टन, न्यूजिल्यान्ड । प्रशान्त महासागरको तटीय किनाराको झिलमा पपुआ न्यू गिनी ९पिएनजी०को एउटा हवाइजहाज शुक्रबार दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । माइक्रोनेसियाको हवाइ मैदानमा उत्रन लाग्दा पिएनजीको जहाज विमानस्थल नजिकको झिलमा खसेको थियो ।
जाकार्ता । मध्य इन्डोनेसियामा शुक्रबार ६।१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । यस भूकम्पपछि सुनामी चेतावनी भने नदिइएको भू विज्ञान विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
संसारमा केही त्यस्ता महिलाहरु छन् जो आफ्नो सफतला र प्रभावको कारण सर्वप्रख्यात छन् । त्यस्ता महिलाहरुको प्रसंगमा पाँच महिला सधै अग्रणी स्थानमा आउँछन्
वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका ब्रेट क्याभानाले त्यहाँको सिनेट न्यायिक समितिसमक्ष आफूमाथि लगाइएको यौन आक्रमणको आरोपको कडा प्रतिबाद गरेका छन् ।
भारतमा यात्रुवाहक रेल दुर्घटना
नयाँ दिल्ली । भारतको पूर्वी राज्य विहारको दरभङ्गा जिल्लामा रेल दुर्घटना भएको छ । रेलको पटरीबाट तीनओटा डिब्बा छुट्टिएर यो दुर्घटना भएको रेल सेवाका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।